Amanqaku kaSamantha Gilbert Martech Zone |
Amanqaku ngu USamantha Gilbert
USamantha R. Gilbert usebenze njengentatheli kwi-arhente yokupapasha kwi-Intanethi eNew York, e-USA iminyaka emibini. Ukwayingcali yokubhala eyiyo kwimixholo efana nokubhloga, ubugcisa bale mihla kunye nemfundo.
Intengiso yaBantu: Indlela eNtsha yokuKhuthaza iiMveliso zakho
NgoLwesine, Novemba 15, 2018 NgeCawa, ngo-Novemba 18, 2018 USamantha Gilbert
Ukuba uburhweba iimveliso zakho ixesha elide kungekho ziphumo zintle, mhlawumbi lixesha lokuba uthathe ingqalelo kwintengiso yemveli njengesisombululo esisigxina kwiingxaki zakho. Iintengiso zemveli ziya kukunceda, ngakumbi xa kufikwa ekunyuseni iintengiso zakho zentlalo kunye nokuqhuba abasebenzisi ojolise kubo kumxholo wakho. Kodwa kuqala, masingene kwizinto zentengiso zomthonyama ngaphambi kokuba sicinge ngendlela.